၂၅ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးဖြတ်ချက် အမှား မခ? - Yangon Media Group
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင် ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှား မချဖူးကြောင်း မတ် ၃၁ ရက်က မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်ညီလာခံတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ကပြောသည်။
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင် အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ညီလာခံများ ကျင်းပလျက်ရှိရာ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ညီလာခံကို ယနေ့ကျင်းပခြင်းဖြစ် သည်။ ဒေသအားလုံး ကျင်းပပြီးနောက် အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ဧပြီ ၇ ရက်တွင် နေပြည်တော် ၌ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်ညီလာခံအား ဆက်လက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ”အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ခေါင်းဆောင် ကောင်းကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ ရထားပါတယ်။ အဲဒီ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဖဝါးခြေထပ်လျှောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်း ဆောင်မျိုး တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲရပါမယ်။ ရလာတဲ့အ ခိုက်အတန့်မှာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အမိအရဆုပ်ကိုင်ရ ပါမယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်နောက်က ဖဝါးခြေထပ် လိုက်ရ ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်(ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်)နဲ့ အတူတွဲလုပ်တာ နှစ်ပေါင်းအစိတ်ကျော် ရှိပါ ပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မကြုံဖူးပါ ဘူး။ မှန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချည်းပဲ ချခဲ့တယ်။ ယုံနိုင် စရာတောင် မရှိပါဘူး။ ဘာလို့ သူများတွေထက်သာနေလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဥာဏ်နဲ့ လိုက်မမီဘူး ဖြစ်နေတယ်”ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော် မြင့်မောင်က ပြောသည်။
လက်တွေ့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွင် နိုင်ငံရေးကိုတိုင်း ပြည် တိုးတက်ကြီးပွား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သည့်စိတ်ဖြင့် ဆောင် ရွက်လိုသည့် ခေတ်လူငယ်များစွာ ရှိလာရာ အဆိုပါ လူ ငယ်များစွာမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)ပါတီကို ပိုမိုယုံကြည်လာမှုကို တွေ့ရှိကြောင်း၊ လူငယ် များအနေဖြင့်လည်း လူကြီးများထက် ပိုမိုထက်မြက်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ရွေးချယ်ပွဲကို ၃၁ ရက်ညပိုင်း အထိ အဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦးဖြင့် အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၅ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆုံးဖြတ်ချက်အမှား မခ
ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဘင်္ဂါလီ တစ်ရာကျော်ကို နေရပ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်
ယခုနှစ်ခြောက်လအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ ကျွဲနွားကောင်ရေ တစ်သောင်းခွဲကျော် ပြည်ပသိ??